१ सय १५ सांसद हामीसँग छ, बहुमत पुग्छ : झलनाथ खनाल
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि (फागुन २३ गते) बोलाएकी छिन्।
बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दौडधुप जारी छ।
दुवै समूहको दौडधुपको पछि बेग्लाबेग्लै आकांक्षा रहेका छन्। ओली समूहको आकांक्षा भोलि बस्‍ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए त्यसलाई असफल बनाउने र सरकारलाई निरन्तरता दिने छ।
प्रचण्ड समूहको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेर प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीलाई हटाउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललगायत संसद्‍मा रहेका दलहरूबीच सहमति कायम गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्‍ने छ।
यसैबीच, भोलि बस्‍ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाको प्रचण्ड समूह कसरी प्रस्तुत हुन्छ? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता कसले गर्छ? प्रचण्ड समूहका सांसदहरू सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष बस्‍ने लाइनमा बस्छन्? नयाँ सरकार गठन हुने भए सत्ता समीकरण कसरी होला? लगायत प्रश्‍नमा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित बनेको छ।
यसै सन्दर्भमा रहेर प्रचण्ड समूहका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग देखापढीकर्मी जङ्‍ग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि बस्दै छ। तपाईंहरूको पार्टी (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा) बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ?
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले जुन ऐतिहासिक फैसला गरेको छ, त्यो फैसलाले न्यायलयको परिपक्वता देखाएको छ। त्यसरी नै व्यवस्थापिकाले पनि परिपक्वता देखाउनुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अन्य दलहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी अगाडि बढ्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ?
त्यसबारेमा सबै दलसँग विचार विमर्श गरिरहेका छौं। नेकपाका सांसदहरूसँग पनि सरसल्लाह गरिरहेका छौं। सरसल्लाह र विमर्शबाट निष्कर्ष निकाल्छौं। सोहीअनुसार अगाडि बढ्छौं।
अविश्वासको प्रस्ताव नेकपाले कि कांग्रेसले दर्ता गर्छ?
सरसल्लाह र विचार विमर्शपछि कसले गर्ने भन्‍ने हुन्छ।
हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकको ‘म्यान्डेट’ चाहिँ के हो?
संसदीय दलको हिजोको बैठकबाट केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सदस्य र अध्यक्षको भूमिकाबाट निकालिसकेको अवस्थामा संसदीय दलको नेताबाट हटाउने नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने भएपछि बैठकले नेकपाको संसदीय दलको नयाँ नेता पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चयन गर्ने निर्णय गर्‍यो। केही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू समेत बैठकले पारित गरेको छ।
पारित भएका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूचाहिँ के-के हुन्?
यसबारे नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङजीलाई सोध्नुहोस्।
अनि, तपाईंकै अध्यक्षतामा हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका सांसदको सङ्ख्याचाहिँ कति हो?
एक सय १५ जना सांसदको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूको हस्ताक्षर नै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सङ्‍घीय संसद् र राष्ट्रियसभामा गरेर दुई सय २० सांसद छन्। एक सय १० सांसदले बहुमत पुग्छ।
नयाँ सत्ता समीकरण हुनु आवश्यक छ। त्यसका लागि सबै मुख्य राजनीतिक दलहरू जो संसद्‍मा छन्, विचार विमर्श र वार्ता गर्छौं। बढी अनौपचारिक ढङ्‍गले भइरहेको अहिलेको वार्तालाई औपचारिक रूपमा बढाउँछौं र नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरू गर्छौं।
उसो भए तपाईंहरूसँग स्पष्ट बहुमत छ?
छ, हामी बहुमतबाट निर्णय गर्छौं।
भोलि बस्‍ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा तपाईंहरू सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षका सांसद बस्‍ने लाइनमा बस्‍नुहुन्छ?
सङ्‍घीय संसद् सचिवालयले तोकिएअनुसार हामी सत्तापक्षकै सांसदहरू बस्‍ने ठाउँमा बस्छौं। निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिता विवाद निरूपण गरेपछि त सोहीअनुसार हुँदै जान्छ।
त्यसरी बस्दा अप्ठ्यारो हुँदैन?
हाल नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित छ। कानुनी रूपमा विभाजन हुन बाँकी छ। एकताको सम्भावना कत्तिको छ?
जसले संविधानविरोधी काम गरेका छन्, गणतन्त्रविरोधी काम गरेका छन्, लोकतन्त्रविरोधी काम गरेका छन्, जनताले दिएको स्थायित्वविरोधी काम गरेका छन् र प्रतिगमनसँगै प्रतिक्रान्ति निम्त्याउने काम गरेका छन्, उनीहरूले ती कर्महरूका बारेमा आत्मालोचना गरेर सच्चिने, पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासनलाई मान्‍ने, विधि र पद्धतिलाई मान्‍ने भए पार्टी एकता हुन्छ।
नयाँ सरकारको समीकरण कसरी होला त?
प्रकाशित: शनिबार, फागुन २२, २०७७ १२:५४
बहुमतका लागि एक सय १० सांसद भए पुग्‍छ, तर एक सय १५ जना हामीसँग छ।
आत्मालोचना गरेर सच्चिने, पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासनलाई मान्‍ने, विधि र पद्धतिलाई मान्‍ने भए पार्टी एकता हुनसक्छ।